Mary Queen weScots Mambokadzi weScots Play Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Maria Stuart ndomumwe wemadzishe ane mukurumbira muScotland neGreat Britain nekuda kwehuwandu hwemifananidzo yehunyanzvi hwenhoroondo yehupenyu hwake. Mune yazvino vhezheni yemitambo, Maria Stuart, Mambokadzi weScotland nemutungamiriri Josie Rourke, ari kumugadzira bhaisikopo rake rekutanga nemutambo wenhoroondo. Embodies Saoirse Ronan (Ladybird) mambo wechidiki uye anomupa mufananidzo wemukadzi anodada uye akangwara anoedza kuzvipikisa achipokana nemadzitateguru nechechi. Iyi firimu, iyo yakaburitswa munaNovember 15, 2018, ichapemberera yayo yemahara TV yekutanga paVox munaKurume 27.03. Chikonzero chakakwana chekuti isu titarise zvakanyanya kuchinjika kwemafirimu ezvino zvenhoroondo zvinhu.
Mary Stuart, Mambokadzi weScotland mushure mekunyora naBeau Willimon, iyo yakabva yabva mubhuku. Mambokadzi weScots: Hupenyu Hwechokwadi hwaMary Stuart yakavakirwa naJohn Guy. Inotarisa pachikamu chehupenyu hweMambokadzi wechidiki, waakapedza muScotland. Muchiitiko chekutanga iwe unogona kuona Maria Stuart akapfugama pa scaffold nekutarisa kwekuzvikudza uye kusingaputsika. Mucherechedzo wakakwana weratidziro yaSaoirse Ronan yemambokadzi wechidiki, anomiririra zvaanotenda kusvika kumagumo uye asingatenderi. Zvisinei, mutambi mukuru anokandwa zvakanaka. Kutenda kugadzira-up uye zvipfeko zvemugadziri Alexandra Byrne, anotaridzika zvakanyanya kufanana nemifananidzo yepakutanga yaMary Queen weScots. Asi kuita kwake kwakanakisa zvakare uye kunotenderedzwa nemaitiro akatariswa nemaitiro uye chiso.
Mamiriro ekunze anoshanduka neinoyevedza shanduko uye wave kuona yechidiki Maria stuart pfugama pamhenderekedzo yeScotland. Mushure mekufa kamwe kamwe kwemurume wake wekutanga Franz II Mambo weFrance. Akadzokera kuScotland aine makore gumi nemasere kuti atore bhizinesi rehurumende kubva kune munun'una wake James Stewart (James McArdle) uye kuti atore kodzero yake kuchigaro cheScotland. Mukuita kudaro, anokurumidza kutarisana nemanomano ezvematongerwo enyika uye zvimiro zvemadzitateguru. Nekuti vanachipangamazano vavo vechirume havafariri kutongwa nemukadzi uye vanonyanya kuita zvido zvavo.
Mukuwedzera, kune rwisano yorudzidziso pakati pavaPurotesitendi navaKaturike yakapararira muzana ramakore rechi 16. Mune chimwe chezviitiko zvekutanga mushure mekusvika kwake, Mary Stuart anopinda mukukonana nevamiriri veChechi yePurotesitendi. Nemhaka yokuti somuKaturike akapika anozivisa kuremekedza zvitendero zvose zvavadzorwi vake. Asi anoramba kutendeukira kuchiPurotesitendi pachake. Izvi zvinokuchidzira kutya kwekereke yePurotesitendi yekufurirwa naPope. Muprista John Knox akabatanidzwa naDavid Tennant (Dr. Who), anotora izvi semukana wekukurudzira kurwisana namambokadzi wechidiki. Kubva papurupiti yake, munhu anoshamisa asina tsitsi akatuka Maria Stuart uye akaita zvese kukurudzira vanhuwo zvavo kuti vamurwise.
Firimu rinoziva kubatanidza madingindira ehubaba nekereke kuita mutsara wenyaya. Iyo inomhanya mufirimu rose, asi kunyanya inosarudza hafu yekutanga uye inopera mukupandukira kwehafu-mukoma waMaria. Kunyange kana izvi zvakaputsika nokukurumidza uye zvisingabudiriri mufirimu. Iine simba rakasimba pane imwezve chiito uye inova nechokwadi chekusimudzira hunhu.
Mukadzi wechidiki uye mambokadzi anodada
Muchikamu chekutanga chetatu chemufirimu kunyanya, huduku hwaMaria Stuart hunowanzotorwa. Saoirse Ronan anonzwisisa zvinoshamisa pakati pekuratidzwa kwemukadzi mudiki uye asina ruzivo. Uyo anenge musikana. Pamwe nekushandura chimiro cheanozvikudza uye akasimba mambokadzi anoedza kuzvisimbisa pamusoro pevapi vezano vechirume. Kuratidzwa kwechisikana kunonyanya kuratidzwa mumifananidzo nevashandikadzi vaMaria Stuart. Apa vakadzi vechidiki vanoseka nekuseka vachitaura nyaya dziri kure nechikuva chezvematongerwo enyika.
Hudiki uye naivety zvakare zvinotungamira kumuchato wekukurumidza naIshe Henry Darnley (Jack Lowden) umo mambokadzi wechidiki anowira pamusoro pezvitsitsinho murudo. Uku kutaura kwehupwere kusaziva kunopa kukurudzira kune imwe nyaya yakakosha yakatenderedza wanano isingafadze kuna Lord Darnley. Jack Lowden (Dunkirk) anomiririra mudiki uye anozvikudza muchinda nemufananidzo wake. Ndiani anogutsikana nezvake uye saka anoteedzera zvishuvo zvepamusoro.
Nekune rumwe rutivi, mambo wechidiki akanzwa kumanikidzwa uye mutoro wezvinhu zvehurumende achiri mudiki (asati asvika kuScotland). Izvi zvinoreva kuti anofanira kuita zvakadzikama uye nokungwarira kuitira kuti asarega utera hwake pachake huchibuda pachena. Saoirse Ronan anobata chiitiko chekuenzanisa pakati pemativi maviri aya echimiro zvinoshamisa, pasina imwe yemifananidzo inoratidzika yakawandisa. Izvi zvinopa chimiro chaMaria Stuart kunyanya kuvimbika.
Maria Stuart naMambokadzi Elizabeth I - Nyaya yevakadzi vaviri vakasimba
Chimwe chinhu chakakosha chinomhanya seshinda tsvuku kuburikidza nefirimu. Hukama husinganzwisisike pakati paMary Queen weScots naQueen Elizabeth I inoridzwa naMargot Robbie (Shiri Dzemhuka: Kusunungurwa kwaHarley Quinn). Nepo vahosi vaviri vachinyanya kuda mhinduro ine runyararo, ivo vanofanirwawo kutevera zvinofarirwa nevapi vemazano vavo uyezve kutevera zvinangwa zvavo. Mary Stuart anozviona semugari wenhaka akakodzera pachigaro cheEngland, icho Erizabheti asingagoni kugamuchira. Izvi zvinogara zvichitungamira kumakakatanwa nekukakavadzana pakati peEngland neScotland. Nekudaro, izvi zvinongotaridzirwa chete mufirimu uye kwete kuratidzwa.
Pakazara, kukakavara kwemauto mufirimu kunongokurukurwa chete munhaurirano, uye chete kupandukira kwehafu-mukoma waMaria kunoitwa. Simba remufirimu uyu rinonyanya kutsamira pakuratidza mhirizhonga padare pane kuratidza hondo. Asi izvi ndizvo chaizvo zvinotariswa naMary Queen weScots Mambokadzi weScots. Iyo yaanobudirira kutenda kune yakanaka, dzimwe nguva yakakura ensemble yevatambi.
Hukama huri pakati pavahosi vaviri hunozopedzisira nekusangana. Mushure mekunge vaviri vacho vangochinjana mabhii mufirimu rose, vanogovana chingave chiitiko chakanakisa mufirimu. Muimba yekugezera yakavanzika, vaviri ava vanosangana zvekurangana pakati pemachira erineni nemaketeni. Vakadzi vaviri vanosangana mumwe nemumwe avo pakupera kwefirimu vanoratidzirwa nemamiriro akafanana uye asi akasiyana ehupenyu. Kune rimwe divi Erizabheti, uyo akavhara chiso chake chaive nechiratidzo chechibhokisi nemake-up akasiya zvese kuti arambe ari musimba. Kunyangwe zvaunotenda uye zvechikadzi zvako. "Ini zvino ndava murume kupfuura mukadzi, ndizvo zvakaitwa nechigaro cheumambo pandiri. Kune rumwe rutivi, Maria, uyo kunyange pamagumo efirimu achiri kuratidza runako rwechisikigo uye chido chisingachinji. Uyo anobatirira pakutenda kwake kusvika kumagumo uye akatogadzirira kuzvifira.
Mary Queen weScots, Mambokadzi weScotland, mutambo wenhoroondo, unotora rusununguko rudiki rwehunyanzvi mukuitwa kwechokwadi. Chinonyanya kukoshesa firimu iri pakugadzirisa kwezvematongerwo enyika uye chikamu chiyeuchidzo chesipo muchiitiko chekare. Kuita kwevatambi kunonyanya kukosha, kunyanya vatambi vaviri Saoirse Ronan naMargot Robbie, vanoita paOscar level. Iyi firimu inotenderedzwa nemapfekero aAlexandra Byrne anoenderana nechiitiko chimwe nechimwe. Zvakare mimhanzi yekumashure kubva kuMax Richter.
Maria Stuart, Mambokadzi weScotland - BluRay
Kare Brzrkr: Netflix iri kuronga hombe chiito franchise yakatenderedza Keanu Reeves 'comic series.
Inotevera Monster Hunter Rise inowanikwa yeNintendo Chinja
Netflix Karenda: Ndira 2021 - Nyowani nhevedzano nemafirimu
Firimu zano: "Alita: Hondo Ngirozi" mubhaisikopo
"Rocky" paKuzviuraya Squad 2: Sylvester Stallone anowedzera kukanda